तनहुँका कुन पालिकामा कति छन् मतदाता ? (सूची सहित) -
२१ बैशाख २०७९, बुधबार १८:०७
तनहुँका कुन पालिकामा कति छन् मतदाता ? (सूची सहित)
किरण श्रेष्ठ २१ बैशाख २०७९, बुधबार १८:०७
तनहुँ । तनहुँमा यसपटक अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा ४९ हजार ८६९ जना मतदाता थप भएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा गत चुनावको तुलनामा ८ हजार ९५३ जना मतदाता नयाँ थप भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको तथ्याँकअनुसार मतदाताको संख्या शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा मात्रै ३८ हजार ३१५ जना पुगेका छन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा शुक्लागण्डकीमा मतदाताको संख्या २९ हजार ३६२ जना थियो ।
नयाँ मतदाताको संख्या थप भएसँगै राजनीतिक जोड घटाउमा पनि पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ । नयाँ मतदाताको रुझानले यस पटकको चुनावी परिणाममा अदल बदल गर्नसक्ने पर्याप्त संख्या देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी २०७९ वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि आइतबार अन्तिम मतदाता नामावलीको सार्वजनिक गरेको छ । तनहुँमा दुई लाख ४४ हजार ३४० जना मतदाताको नामावली सार्वजनिक भएको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत हरिप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।
जसमा एक लाख १७ हजार १३४ पुरुष र एक लाख २७ हजार २०६ महिला मतदाता रहेका छन् । एक लाख चार हजार ३२७ महिला र ९० हजार १४४ पुरुष गरेर २०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक लाख ९४ हजार ४७१ मतदाता थिए ।
तथ्याँकअनुसार तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा विगतको भन्दा २ हजार ७२९ जना थप भइ मतदाताको संख्या १३ हजार ६३१ पुगेको छ । यस्तै ऋषिङ गाउँपालिकामा ३ हजार ६३२ जना थप भइ मतदाताको संख्या १८ हजार २३८ जना पुगेका छन् ।
आयोगले दिएको तथ्याँकअनुसार घिरिङ गाउँपालिकामा २ हजार ५३७ जना थप भइ मतदाताको संख्या १४ हजार ६७६ जना पुगेको छ । देवघाट गाउँपालिकामा २ हजार ५३० जना थप भइ मतदाताको संख्या १२ हजार ८१५ जना पुगेको छ ।
यस्तै बन्दीपुर गाउँपालिकामा ३ हजार ७०६ जना थप भई मतदाताको संख्या १५ हजार ६३८ जना र म्याग्दे गाउँपालिकामा ३ हजार ७६४ जना नयाँ मतदाता थप भइ १८ हजार १०५ जना पुगेका छन् ।
यसैगरी भानु नगरपालिकामा ८ हजार ९ जना थप भई मतदाताको संख्या ४० हजार ४९६ जना पुगेको छ । त्यस्तै भिमाद नगरपालिकामा ५ हजार ३८४ जना मतदाता थप भई अहिले २४ हजार ८८४ जना पुगेको छ ।
यस्तै व्यास नगरपालिकामा ८ हजार ६२५ जना मतदाता नयाँ थप भएका छन् । व्यास नगरपालिकामा मात्रै ४७ हजार ५४२ जना पुगेका छन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा व्यासमा मतदाताको संख्या ३८ हजार ९१७ थियो ।
तनहुँमा २९७ मतदान केन्द्र
मतदाता बढेसँगै जिल्लामा मतदान केन्द्रको संख्या पनि थप गरिएको छ । यसपाली जिल्लाका १० स्थानीय तहमा २९७ मतदान केन्द्र हुनेछन् ।
मतदान स्थलको संख्या भने घटबढ भएको छैन् । अघिल्लो निर्वाचनमा १३६ मतदानस्थल र २५२ मतदान केन्द्र थिए ।
राजनीतिक भविष्यबारे चितवन कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताले चिन्ता लिनु पर्दैन : शंकर भण्डारी
‘लाइफ इन एलए’को ट्रेलर सार्वजनिक, नेपालमा जेठ ६ बाट प्रदर्शन हुने (भिडिओ सहित)